Jaadka laga keeno Kenya oo maanta si caadi ah uga soo dagay magaalada Muqdisho – Somali Top News
Jaadka laga keeno Kenya oo maanta si caadi ah uga soo dagay magaalada Muqdisho
Kadib go’aankii shalay ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee Somalida, ayaa maanta Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde, waxaa si caadi ah uga soo dagay Diyaaradihii qaadka keeni jiray Muqdisho ee Kenya ka imaan jiray.
Qaar ka mid ah Ganacsatada ayaa xaqiijiyay in si caadi ah qaadka uu kaga soo dagay magaalada Muqdisho, iyadoo intii hore ay ka badan yihiin Diyaaradihii qaadka keeni jiray Magaalada Muqdisho.
Tani ayaa muujinaysa in ganacsatada ka shaqeysa qaadka ee Somalida aysan isku duubnayn, kadib markii shalay qaarkood ay sheegeen inay joojiyeen oo ay iska diideen qaadkii laga keeni jiray dalka Kenya.
Illaa 30 Diyaaradood oo qaad ah ayaa dalka Kenya laga keenaa maalin kasta, kuwaasi oo lagu kala dajiyo Magaalada Muqdisho & Gobolada dalka Somaliya, taasi bedelkeedana Kenya waxa ay aruursataa lacag badan oo doolar ah.
Khilaaf Diblumaasiyadeed ayaa u dhaxeeya dalalka Somaliya & Kenya, kaasi oo ka dhashay kadib markii Kenya ay xiriirka u jartay Dowladda Somaliya, sidoo kalena ay soo ceyrisay Safiirkii Somaliya ee dalkaasi Kenya u fadhiyay.
Ganacsato badan oo Somali ah ayaa macaash kala duwan ka hela ka ganacsiga qaadka, waana sababta ganacsatada ay u muujin waayeen isku duubni ku aadan fulinta go’aanka joojinta qaadka.
← AU reviews logistical challenges hindering troop operations in Somalia
Madaxweynaha Somaliland oo ka dagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya →
Madaxweyne Farmaajo oo Al shabaab u sharaxay qorshahiisa cusub ee dagaal